China MC3-03X macro fekitori uye vagadziri | V-Uyezve
Iyi multi-yekumisikidza macro lens yakakodzera kuongororwa kwezvinhu izvo saizi inosiyana kubva pamamirimita mashoma kusvika kune mamwe masendimita. Kukudzwa uye kutariswa kunogona kugadziridzwa nekugadzirisa iro rinokiya rinotenderera pfundo. Iyo lens yekukudziridza renji inogona kusarudzwa nenzira yegadziriro yekuwedzera machubhu, akaisirwa muchigadzirwa package; chiitiko ichi chinoita kuti chikamu ichi chive chakanakira prototyping zvinangwa uye zvemuchina wekuona maficha anoda kuchinjika. Sezvo iko kushanda F-nhamba ichiwedzera w ...
Iyi yakawanda-gadziriso macro lensyakakodzera kuongororwa kwezvinhu izvo kukura kwacho kunosiyana kubva pamamirimita mashoma kusvika kune mamwe masendimita. Kukudzwa uye kutariswa kunogona kugadziridzwa nekugadzirisa iro rinokiya rinotenderera pfundo.
Iyo lens yekukudziridza renji inogona kusarudzwa nenzira yegadziriro yekuwedzera machubhu, akaisirwa mune chigadzirwa chigadzirwa. chiitiko ichi chinoita kuti chikamu ichi chive chakanakira prototyping zvinangwa uye zvemuchina wekuona maficha anoda kuchinjika. Sezvo iko kushanda F-nhamba ichiwedzera nekukudza, iyo yakakwana kusangana kweye munda kudzika, mufananidzo resolution uye kupenya inochengetwa mune chero lens yekumisikidza.
Zvakare, iyo yekumonyorora kuswededza kunosvika zero pane chero kukudzwa, ichigadzira iyi lens yakanyatso kukodzera kuyerwa kunyorera.
Wide siyana magnifying
Izvi zvinokodzera kuongororwa kwezvakawanda zvakasiyana-siyana zvehukuru hwakasiyana nedetector sarudzo.
Inenge zero kukanganisa
Zvishoma pane 0,05% kukanganisa, pane chero kukudzwa, kunoita kuti lens iyi ive sarudzo yakasarudzika yekuyera kunyorera.
Yakakwana Optical parameter sanganisa
Kuchinja kukudzwa kunoshandurawo lens inoshanda F-nhamba nenzira yekuti kugadzirisa uye kukanganisa kunogadziriswa nguva dzose.
Pashure: TCCXHM dzakateedzana
Matipi - Hot Zvigadzirwa - Sitemap Yakagadziriswa-Focus Lens, Chinhu Chinonzi Telecentric Lens, Bi-Telecentric Lens, Telecentric Zoom Lens, Yakakura Fomati Yakakura Angle Lens, Uv Dmd Lens,